Ra iisal wasaaraha Etoobiya oo sheegay cida ka danbeysa Rabshadaha | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ra iisal wasaaraha Etoobiya oo sheegay cida ka danbeysa Rabshadaha
Ra’isul Wasaaraha dallka Itoobiya Abiy Axmed ayaa si kulul uga hadlay rabshadaha xoogan ee ka socda magaalada Adis Ababa ee ka dhashay dil loo geestay fanaan caan ah oo u dhashay qowmiyada Oromada.
Abiy Axmed oo fariin gaar ah u diray shacabka Itoobiya ayaa sheegay in dilka loo geestay Fanaanka uu ahaa mid qorsheesan oo lagu doonayay in khalalaase iyo dhibaato xoogan lagu abuuro si khal khal amaan dalka loo galiyo.
Waxa uu sheegay Ra’isul Wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in rabshadaha xoogan ee hada ka socda magaalada Adis Ababa iyo magaalooyin kale ay lamid yihiin kuwii dalkaasi ka dhacay sanadkii 2018-kii ilaa 2019-kii uu sheegay in la doonayay in dad badan lagu dilo.
“Dilka fanaanka inuu midnimada, iyo nabadda dalka itoobiya uu wax u dhimeyn balse uu sii xoojin doono si rabitaanka cadowga dalka Itoobiya uu u meel marin waa iney shacabka dalku gacmaha isqabsadaan” ayuu yiri Dr Abiy Axmed
Abiy Axmed ayaa ugu baaqay shacabka Itoobiya in ay isdajiyaan ayna xaalada kusoo noqon doonto si caadi ah, waxa uuna balan qaaday in baaritaan lagu sameyn doono cida dishay iyo sababta loo dilay Fanaanka.
Dhinaca kale Ciidamo badan oo milatari ah ayaa loo daad gureeyay magaalada Adis Ababa iyo magaalooyinka kale ee ka socdaan rabshadaha xoogan si ay uga hortagaan rabshadaha xoogan ee sii faafaya.
Rabshadaha ka socda Magaalooyinka Oromada degan yihiin ayaa sababay dhimashada dad ka badan 80-qof iyo dhaawac tiro badan , waxaana laga cabsi qabaa khasaaraha inta hada la ogyahay in ay kasoo kordhaan.
Previous articleShirkii Dowlada Federaalka iyo Maamul Goboleydyada oo Fashil ku dhow
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo loogu Baaqay in uu ku Tusaalo Qaato Etoobiya uu Joojiyo Muda kordhinta
Siyaasiyiinta Mucaraadka oo Soo dhaweeyy Hadalkii ka soo ...